Nabad Goday Ma Xidhanto (Sheeko Xariir) - iftineducation.com
Nabad Goday Ma Xidhanto (Sheeko Xariir)
aadan21 / December 27, 2011
Nin baa beri guri ma s ku jiro degay. Markaasuu maskii arkay. Maskuna mas daalin ah ma ahayn. Casha walba xoolaha iyo caruurta dhexdooda ayuu iska dhex mari jiray oo waxba ma yeeli jirin.
Maalintii dambe ayaa ninkii tashaday oo is yidhi: “Waar horta maskani yaanuu caruurta iyo xoolaha kaa cunin e maa dishid?” Markaasuu maskii oo geed jirriddiisa jiifa u yimi oo is yidhi: “Seef qoorta kaga jar!”
Markaasuu la waayay oo jeeftii jirriddi ku dhacday. Markaasaa maskii toosay oo cararay oo god galay.
Habeenkii markii la seexday buu maskii soo baxay oo ninka inankiisii curad qaniinay. Inankiina qaniinyadii buu u dhintay.
Subixii baa ninkii maskii u yimi oo yidhi: “Waar, masyohow, aan wacadtano oo is deyno!” Markaasuu maskii yidhi: “Waar ninyohow, berigii horeba waa taynu nabadda ahayne aad nabadii goysay; ininkana intaan seefta jirridda ku taal arkayo, adna aad inkaaga xabaashiisa arkayso, wacad inoo xidhmi maayo’e ina kala kaxee”!”
Iska key Illow(Qiso Jaceyl oo xiiso badan)Qeybtii 17-aad
Ninkii Cilmiga Siyaasadda Bartay ( Sheeko Murtiyeed ).